Arabia Saodita - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Arabia Saodita
Visa mpizahatany ao Arabia Saodita
Septambra 14, 2020 Shubham Sharma Arabia Saodita, visa ho
Arabia Saodita dia ao amin'ny firenena Arabo. Izany koa dia fantatra amin'ny anarana hoe Tontolo Arabo. Ireo no firenena manana ny Arabo ho tenim-pirenena ofisialy. Saudi Arabia dia toerana mety hitsidihana an'izao tontolo izao. Noho izany,
Ahoana ny fomba fangatahana fangatahana fialokalofana any Saudi Arabia
Septambra 8, 2020 Maitri Jha mpitsoa-ponenana, Arabia Saodita
Tsy manana politika feno momba ny fifindra-monina koa i Saudi Arabia. Fa misy ny lalàna Iqama. Izy io dia miasa ho toy ny andiam-pitsipika momba ny satan'ny zon'ireo mpifindra monina vahiny ao amin'ny firenena. Tsy maintsy mahazo izy
Te-hahazo asa ve ianao na miasa any Arabia Saodita? Fantaro eto!
Aprily 30, 2020 Karuna Chandna asa, Arabia Saodita
Ireo mpianatra UK dia mitady an'i Job any Saudi Arabia. Satria mety mahita Jobs eto amin'ny indostrian'ny solika ianao. Miaraka amin'ny asa eo amin'ny sehatra toa ny fanabeazana, ny fampianarana ary ny IT. Ny fitomboan'ny fifantohana dia ny fanitarana ny toekarena. Ary mampihena ny
Febroary 4, 2020 Shubham Sharma Arabia Saodita, Travel
Arabia Saodita dia fantatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny hoe The Kingdom Of Saudi Arabia dia firenena iray ao Atsinanana-Afovoany. Arabia Saodita dia mandray anjara mavitrika amin'ny famokarana solika manerantany. Hatramin'ny 2013, ny fomba tokana hitsidihana an'i Arabia Saodita dia amin'ny alàlan'ny visa Business ihany
Fitaterana fomba tsara indrindra any Arabia Saodita
Febroary 2, 2020 Shubham Sharma mandehana, Arabia Saodita, Travel
Misy fotoana izay tsy fahampian'ny fitaterana saika amin'ny faritra rehetra. Ny Fanjakan'i Saudi Arabia dia niatrika zava-tsarotra maro momba ny fitaterana. Tamin'ny fiandohan'ny taona 1900, Saudi dia tsy manana loharanom-pitaterana hafa ankoatry ny arabe. Fa rehefa afaka
Banky ambony ao amin'ny Fanjakan'i Arabia Saodita
Febroary 1, 2020 Shubham Sharma ny vola, Arabia Saodita
Ny Fanjakana Saudi Arabia dia manana banky manana fahazoan-dàlana 24 avy ary banky 12 no ao an-toerana ary ny fitsaharana dia sampan'ny banky vahiny. Ny banky rehetra any Arabia Saodita dia tantanan'ny Fahefana Arabo Saodiana Saodiana.
Ny oniversite iraisam-pirenena tsara indrindra ao amin'ny fanjakan'i Arabia Saodita.
Janoary 31, 2020 Shubham Sharma Arabia Saodita, fianarana
Toerana tsara indrindra hitsidihana an'I Arabia Saodita
Janoary 30, 2020 Karuna Chandna Arabia Saodita, Travel
Saudi Arabia dia haben'ny Moske satria Silamo ny ankamaroan'ny olom-pirenena ao amin'ny firenena. Ankoatr'izay dia betsaka ny toeran-kafa izay mitsidika ao amin'ny fanjakana. Misy fotoana tsy misy famantarana
Ny trano fandraisam-bahiny tsara indrindra any Arabia Saodita
Janoary 23, 2020 Karuna Chandna trano fandraisam-bahiny, Arabia Saodita, Travel
Ny Fanjakana Saudi Arabia dia firenena midadasika, tsy misy tsy fahampiana feno hotely mihaja. Ireo hotely any Arabia Saodita dia tena nahazo aingam-panahy tamin'ny famolavolana maoderina miaraka amin'ny lovan'ny lovany. Any Jeddah ary